Topnepalnews.com | दोस्रोपटक उपाधि जित्ने दाउमा इंग्ल्याण्ड र वेष्ट इन्डिज,कसले मार्जा बाजी ?
दोस्रोपटक उपाधि जित्ने दाउमा इंग्ल्याण्ड र वेष्ट इन्डिज,कसले मार्जा बाजी ?
Posted on: April 30, 2016 | views: 400
एजेन्सी,चैत २१ । आइसिसी ट्वान्टी–२० विश्वकप क्रिकेटको फाइनलमा आइतबार इंग्ल्याण्ड र वेष्ट इन्डिजबिच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ । कोलकाताको इडन गार्डेन मैदानमा बेलुका सवा सात बजेसुरु हुने खेलमा यी दुवै टोली दोस्रोपटक च्याम्पियन बन्ने होडमा मैदान उत्रदैछन् । इंग्ल्याण्ड र वेष्ट इन्डिज दुवैले यसअघि एक एक पटक ट्वेन्टी–ट्वेन्टी विश्वकपको उपाधि जितेका छन् ।
इंग्ल्याण्ड सेमिफाइनलमा न्युजिल्याण्डलाई सात विकेटले हराएर फाइलनमा आइपुगेको हो । यस्तै वेष्ट इन्डिजले आयोजक भारतलाई सात विकेटले नै हराएर फाइनलमा स्थान बनाएको हो । इंग्ल्याण्डले सन् २०१० मा वेष्ट इन्डिजमा भएको खेलमा अस्ट्रेलियालाई सात विकेटले हराएर उपाधि उचालेको थियो । यस्तै वेष्ट इन्डिजले सन् २०१२ मा श्रीलंकामा भएको खेलमा घरेलु टोलीलाई ३६ रनले हराएर उपाधि जितेको थियो ।
आइतबार गेलको आँखा ट्वान्टी–२० अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा कीर्तिमानी १ सय छक्का प्रहार गर्ने पहिलो खेलाडी बन्नेमा पनि छ। जारी प्रतियोगितगामा ११ छक्का प्रहार गरिसकेका उनले ९८ छक्का प्रहार गरिसकेका छन्। त्यस्तै प्रतियोगितामा इङ्ल्यान्डले ३४ छक्का प्रहार गरिसकेको छ। जुन संख्या अन्य टोलीको भन्दा धेरै हो। त्यसैले पनि दुई टोलीबीचको प्रतिस्पर्धा निकै रोमान्चक हुने अनुमान गरिएको छ।
इंग्ल्याण्ड र वेष्ट इन्डिज दुवै टोली यो पटक उपाधि उचाल्दै ट्वेन्टी–ट्वेन्टी विश्वकपमा दुई पटक उपाधि जित्ने पहिलो टोली बन्ने लक्ष्यका साथ मैदान उत्रने छन् । इंग्ल्याण्ड इओन मोर्गान तथा वेष्ट इन्डिज डरेन सामीको कप्तानीमा मैदान उत्रने छ ।